Ogaden News Agency (ONA) – Buurta Karinka Sollo Waxay ciidamada JWXO ku dileen 20 Woyana ah. Dhaawacbadan iyo khasaare kalena waxay gaadhsiyeen kolonyo ciidanka woyanaha ah.
Buurta Karinka Sollo Waxay ciidamada JWXO ku dileen 20 Woyana ah. Dhaawacbadan iyo khasaare kalena waxay gaadhsiyeen kolonyo ciidanka woyanaha ah.
Posted by ONA Admin	/ February 4, 2012
Waxaa nasoo gaadhay faahfaahinti dagaalkii 31 janaayo ee sanadkan ka qarxay Buurta Karinka Sollo.
31 janaayo ee sanadkan ayaa waxa uu dagaal ku qabsaday kolanyo gaadiid cadaw ah oo maraysay wadada isku xidha Dhagaxbuur iyo Dhagaxmadaw. Dagaalkan oo ka dhacay meesha lagu magacaabo karinka Sollo oo ah buur yar oo saaran Toga Faafan ayaa waxaa ciidamada cadawga loogu gaystay khasaare kala duwan.
kamiinkan sida fiican loo qorsheeyay ee ay galeen CWXO ayaa waxaa ugu horaynba soo galay dabinkii Baabuur nooca Ciidamada ah oo uu leeyahay Cadawgu kaas oo basbeelay,. Intaa ka dib ayaa rasaas xoogan oo la isdhaafsaday iyo dagaal kulul oo bilawday ayaa ciidamada cadawga lagaga sahayday in ka badan 20 askari iyadoo dhaawacuna aad u badan yahay.
CWXO, ee ku caan baxay gacan kulaylka marka ay la dagaalamayaan cadawga, ayaa waxay ku guulaysteen inay dib ugu soo celiyaan kolanyadii u socotay dhianaca Dhagaxmadaw,taas oo la xaqiijiyay inay waday sahay la rabay in la gaadhsiiyo ciidamada cadawga ee degen magaalada Dhagaxmadaw.
Ciidanka Waddaniga Xoraynta Ogaadeenya oo ah mid u taagan xoraynta dalka ayaa wacad ku maray inay kala jaraan dhamaan isgaadhsiinta,iyo taakulaynta ciidamada cadawga.
INSHALLA GUUL ONLF WAXAAN TAGEERO BUUXDA LA GARABTAGANAHAY WAX KASTO OO CADAW KU AH GUMAYSIGA TOOSKA AH IYO KAN DADBANBAAA
DADKA REER OGADEENIYA TARIIKHDA XUSTA XUSINA DOONTA WAA LA DHIMANAYAA ADIGOO SARIIR HURDA INTA LAGU GAWRICII LAHAA ADIGII HALGAMAYAA DHIMO